Baaritaankii gabadhii xijaabka qabtay oo la garaacay oo hoos loo dhigay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dumar bannaanbax ka dhigaaya fagaaraha Sergels Torg. Sawirle: Jessica Gow/TT.
Baaritaankii gabadhii xijaabka qabtay oo la garaacay oo hoos loo dhigay
La daabacay onsdag 12 februari 2014 kl 14.12
Baaritaankii dacwaddii ku saabsanayd gabadhii uurka lahayd oo horay dacwadda u soo gudbisay ayaa hoos loo dhigay. Gabadhaas ayaa ku dacwooneysey in iyadoo ku sugan xaafadda Farsta xijaabka laga tuuray, madaxa loogu garaacay baabuur, hadalo isir-nacayn ku dhisanna loogu yeeray. Sida boliiska laga soo xigtay waxaan dacwaddaas loo hayn cid la tuhunsan yahay iyo dad markhaanti ka ahaa markii ay dhacdadaasi dhacaysey.
Towe Hägg oo ka socota boliiska Stockholm ayaa baaritaanka ku sifeysey in uu ahaa mid ballaaran. Waxyaalihii baaritaanka lagu sameeyey waxaa ka mid ahaa sawiro laga soo ururiyey kaamirada wax lagu ilaaliyo, laakiin aan wax natiijo ah laga gaarin.
Toddobaad markii ay ka soo wareegtay dacwaddii ay soo gudbisey, ayey mar labaad soo gudbisey dacwo kale oo ku saabsan in tiro rag oo aysan garaneyn weerar ku soo qaadeen oo ka dalbeen in ay dib u la noqoto dacwaddii hore. Dacwaddaas dambena waxay ka mid ahayd baaritaanka hadda hoos loo dhigay.
Dhacdadaan ayaa horseedday gadoodkii loogu magacdaray gadoodkii xijaabka oo dumar badani go’aansadeen in ay hal maalin xirtaan xijaab si ay taageero ugu muujiyaan dadka waxyeelo loogu geysto caqiidada ay aamminsan yihiin awgeed.